Antigua neBarbuda Real Estate LOT-AG07
(Citizenship yeAntigua neBarbuda yeSouth Point mugove)
Kutengeswa kwechikamu chehotera yekutenga kuti uwane Citizenship yeAntigua neBarbuda
Mahombekombe emvura epamberi
23-suite Boutique hotera
Hotel South Point inosanganisira ye23 yemvura yekumberi kondomu suites yakatarisana neCaribbean Sea uye Falmouth Marina. Yakavakirwa muzvivakwa zvishanu zvakapatsanurwa 2- uye 3-nhurikidzwa zvivakwa pamhenderekedzo yegungwa, yega yega makumi maviri nemasere inopa mukana wakanangana nedziva, marina uye diki rakavanzika gungwa. Nzvimbo dzekushanyira ndedze vaenzi chete uye vanogadzira yakanyarara, yakavanzika oasis pakati peinonyanya kufarirwa nzvimbo yekuAntigua, kunze kweguta guru reSt. John, English Harbour.
South Point ine zvikamu zviviri chete zvemakamuri: 1-yekurara deluxe suite uye 2-yekurara penthouse suite. 20 deluxe suites inogara yekutanga neyechipiri pasi pechivako chimwe nechimwe, uye 3 penthouse suites inogara kumusoro kwepamusoro kwezvivakwa zvitatu zvepakati. Ground floor suites yakakwidziridzwa zvishoma pamusoro penzira huru ine matanho mashanu chete anotungamira kune yavo patio. Iyo yepasi pevhu (yechipiri nhanho) masuti anowanikwa neese ekunze masitepisi uye ane akafara akavharika mabalkoni, nepo penthouse -style padenga mabalkoni anopa akawedzera zvakavanzika uye akawedzera maonero enharaunda yakapoterera.
Yese yakavhurika-kuronga 1-Kamuri yekurara Deluxe Suite inoratidzira yakazara yakashongedzwa kicheni, yekunze yekudyira tafura, sun lounger, nzvimbo yemukati yekugara uye yekugezera yekugezera ine mbiri singi uye yekufamba-mune yekushambidza. Idzi dzimba dzinogona kutengeswa sedzinosangana dzimba nedzinobviswa balcony partitions. Sarudzo dzemubhedha: mubhedha wamambo-saizi kana mabhedha maviri ega. Kugara kwekugara kweiyi kamuri vanhu vakuru vaviri kana vaviri vakuru uye 2 mwana.
2-Kamuri yekurara Penthouse Suites
Iwo Maviri-eimba yekurara Penthouse Suites anokwanisa zvakare kuwanikwa kuburikidza nechokunze masitepisi anotungamira kune yakasarudzika patio yekupinda. Iine maviri akapatsanurwa en-suite yekurara, maviri akapatsanurwa emukati makamuri ekugara, kicheni yakagadzirirwa zvakakwana ine yekunze neyekunze nzvimbo dzekudyira nemabhaloni maviri, akakodzera kumhuri kana shamwari dzinofamba pamwe chete. Iyo yakarongedzwa padenga pabhokisi ine sofa uye tafura yekofi, 2 zuva lounger uye tafura yekunze yekudyira ine hombe zuva amburera. Sarudzo dzemubhedha: mubhedha wamambo-saizi kana mabhedha maviri ega. Kugara kwemukamuri ino vanhu vakuru vana kana vakuru vana nevana vaviri vana.
Zvimwe zvinowedzerwa mune zvese zviri zviviri Deluxe Imwe-yekurara Suite uye Penthouse Mbiri-yekurara inosanganisira kufamba-mune makabati, emhando yepamusoro mbichana zvinhu, yekumhanyisa-isina mahara Wi-Fi, tambo TV uye iPod docking zviteshi. Mabhati ekugezesa uye slippers anopawo, pamwe neamburera, iron uye bhodhi redare. Inobvumirana kofi, tii uye mvura yemumabhodhoro zvinopihwa. Iko kune minibar ine zvimwe zvekubhadhara-se-iwe-enda zvinwiwa uye zvinwiwa. Iyo penthouse suites zvakare ine espresso michina.